Haweenay Caawa Lagu Dilay Magaalada Hargeysa | Araweelo News Network (Archive) -
Published On: Sun, Jun 12th, 2011
Haweenay Caawa Lagu Dilay Magaalada Hargeysa
Hargeysa(ANN) Haweenay ayaa caawa fiidkii lagu toogtay magaalada Hargeysa, saraakiisha booliska ayaa awoodi waayay inay ka hadlaan falkan isku dayo baddan oo ay shebekada Araweelonews samaysay. Laakiin warar ilo kala duwan oo dhinaca hawlwadeenada caafimaadka iyo booliska ah ayaa
noo xaqiijyay falkaa, waxayna sheegeen inay Boolisku ku daba jiraan cidii falkaa ka danbaysay.
Haweenaydaa oo sida ay hawlwadeenada caafimaadka iyo ilo wareedyo dhinaca Booliska ahi noo sheegeen la yidhaahdo Ina Yuusuf Cabdi Shide, taas oo sida ay wararku sheegayaan ka shaqaynaysay qaybta laydhka ee National Full Station (Indha-birta), waxa la keenay cusbitaalka Dr. Axmed Cabdi iyadoo xaalad halis ah oo miyir doorsan ah ku jirta. Waxana ku dhacday rasaas tiradeeda lagu sheegay laba xabadood oo caloosha kaga taal.
Warar aan si cad loo xaqiijin ayaa sheegaya in falkaasi dhacay cawayskii caawa. Kadib markii gabadhaa si af-duub ah loogu qaatay gaadhaa. Kadibna lagu tuuray sheedaha oo dhinaca Woqooyi ka xiga magaalada hargeysa, halkaas oo laga soo qaaday iyadoo xaalad halis ah ku jirta.
Gabadhaa oo ah Hooyo dhawr caruur ah haysata waxa adeer u ahaa Marxuum Maxamuud Cabdi Shide oo si weyn looga yaqaanay Somaliland ahaa nin mujaahid ah oo si weyn uga qayb qaatay horumarka saxaafada xorta ah ee Somaliland iyo halgankii dalka lagu xoreeyayba.
wixii kasoo kordha warkaa kala soco araweelonews sacadaha soo socda